mIRC v 6.35 — MYSTERY ZILLION
mIRC v 6.35
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်် Bro ...
ဒါပေမဲ့ ... ကျနော်တော့ဆွဲလို့မရဘူးဗျ ... Link Error ပြနေလို့။
အဓိက ပြဿနာက ... Download Link ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဒီ Link " http://showing.com/*** " ကို Auto ဆွဲဖွင့်သွားတယ် ... " WOT " ကတော့ Dangerous Site ဆိုပြီးပြနေတယ်။
Virus or Spyware တော့သတိထားပေါ့ .... !!!
အကိုတို့ အဲဒီကောင်က ဘာအတွက်သုံးတဲ့ဟာလဲဗျ..:5:
Mirc 6.35 ထွက်ပြီနော်..
အကိုရေ.. mIRC 6.35 က ဖြင့် ထွက်တာ ကြာပြီလို့ထင်တယ်နော်.. ကျွန်တော်ဖြင့် အဲဒါ နဲ့ သုံးနေတာ 10 လလောက်ရှိပြီ ထင်တာပဲ.. filehippo မှာ စတင်ကတည်း က သုံးနေတာလေ.. .. တကယ်လို့ လိုချင်ရင်တော့ .. ဒီက ဆွဲရတာ လွယ်ပါတယ်ဗျာ.. ဒီကနေ ယူလိုက်ပါ... အဆင်ပြေကြပါစေ........
အကိုရေ.. mIRC 6.35 က ဖြင့် ထွက်တာ ကြာပြီလို့ထင်တယ်နော်.. ကျွန်တော်ဖြင့် အဲဒါ နဲ့ သုံးနေတာ 10 လလောက်ရှိပြီ ထင်တာပဲ..
ကျနော် စက် မှာ expired ဖြစ်သွားလို့ Exit ပဲ ပေါ်တော့တယ် .. ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ .. ပြောကြပါဦး ..
ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ.. Continue ပဲ ပြတယ်.... ဒါပေမယ့် တ ခါ တလေ. exit လို့တော့ပေါ်တယ်.. အဲဒါ ဆိုရင်. ပိတ် ပြီး ပြန်၀င်လိုက်ရင် ၀င်လို့ရတယ် ဗျ... အခုချိန်ထိတော့အဆင်ပြေနေတုန်း ပဲ.........